crack ​ကို ​ဘယ်​လို ​အ​သုံး​ပြု​ရ​လဲ . ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
crack ​ကို ​ဘယ်​လို ​အ​သုံး​ပြု​ရ​လဲ .
thiha: i don't know how to crack for advanced system care
crack ​ကို ​သုံး​တာ​က​တော့ ​လွယ်​ပါ​တယ် . ​တစ်​ကယ်​တန်း ​သွား​ထား​ရ​မှာ​က advanced system care ​ရဲ့ main rooots ​မှာ ​သွား​ထား​ရ​မှာ​ပါ . ​အောက်​က​အ​တိုင်း​လုပ် ​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​တစ်​ခြား program ​တွေ​လဲ ​ဒီ​နည်း​အ​တိုင်း​ပါ​ပဲ . crack ​သုံး​နည်း​က​တော့ ​အ​တူ​တူ​ချည်း​ပါ​ပဲ .
​မိ​မိ​ရ​ထား​တဲ့ advanced system care ​ကို install ​လုပ်​လိုက်​ပါ
​အ​ထဲ​မှာ​ပါ​လာ​တဲ့ crack file ​လေး​ကို copy ​ကူး​ထား​လိုက်​ပါ .
C: >> Program Files >> Advanced System Optimizer3​ကို​သွား​လိုက်​ပါ .
​ဖိုင်​ကို paste ​မ​လုပ်​ခင် ​မိ​မိ install ​လုပ်​ထား​တဲ့ program ​ဖွင့်​ထား​ခြင်း ​ရှိ​မ​ရှိ ​သေ​ချာ​စစ်​ဆေး​ပါ . ​ဖွင့်​ထား​ရင် ​ပိတ်​လိုက်​ပါ .
​ကျွန်​တော်​တို့ Taskbar (​နာ​ရီ​လေး​တွေ​ရှိ​တဲ့ icons ​တွေ​ထဲ) ​မှာ ​လဲ ​ရှာ​ကြည့်​ပါ . advanced system optimizer icon ​လေး​တွေ့​တယ်​ဆို​ရင် right click ​ထောက်​ပြီး exit ​ပေး​လိုက်​ပါ ..
​ကူး​ယူ​ထား​ခဲ့​တဲ့ crack file ​ကို paste ​လုပ်​လိုက်​ပါ ​တစ်​ခု​ခု​မေး​လာ​ရင် ok (​သို့​မ​ဟုတ်) Ok All ​ပေး​လိုက်​ပါ ..
​ကဲ ​အ​ခု​န​က ​ကျွန်​တော်​တို့ active ​မ​ဖြစ်​သေး​တဲ့ advanced system optimizer ​ကို ​ပြန်​ဖွင့်​ကြည့်​လိုက်​ပါ .
​အ​ဆင်​ပြေ​နိုင်​ကြ​ပါ​စေ​ဗျာ .. ​သိ​တဲ့​သူ​အ​ဖို့ ​ရယ်​စ​ရာ​လို ​ဖြစ်​နေ​ပေ​မယ့် . ​မ​သိ​တဲ့​သူ​အ​ဖို့​တော့် ​အ​တော်​ကို ​ခက်​ခဲ​မယ်​ထင်​လို့ ​ဒီ​ပို့စ်​ကို ​ရေး​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ . ​က​လေး​က​လား ​ဆန်​နေ​ရင်​တော့ ​တောင်း​ပန်​ပါ​တယ် .
​အေ​သင် October 18, 2009 at 5:54 AM
​အား​ပေး ​မ​သိ​တဲ​သူ​တွေ​ကူ​ညီး ​စေ​တ​နာ ​ထား​ရှင်း​ပြ​ပေး​တဲ​အ​တွက် ​လေး​စား​ပါ ​ဒါ​ဟာ ​ပ​ညာ​ပါ​လား
thuzaw September 30, 2011 at 10:49 PM
RED ALERT3​မှာ serial key ​လို​နေ​လို့keygen (or) crack ​ကူ ​ညီ ​ပါ​ဦး​ဗျာ